भोलिदेखि ५२ करोड ४१ लाख कित्ता सेयर निष्काशन हुँदै, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
काठमाडौं । भोलि अर्थात वैशाख ६ गतेदेखि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले १ः०.५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ५२ करोड ४१ लाख १९ हजार ७ सय रुपैयाँको ५२ लाख ४१ हजार १९७ कित्ता हकप्रद सेयर...
९ प्रतिशतले बढ्यो ज्योति लाइफको सेयर मूल्य, प्रतिकित्ता कति पुग्यो ?
भोलिदेखि ५२ करोड ४१ लाख कित्ता सेयर निष्काशन हुँदै, कहिलेसम्...
समता घरेलु लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा आरबिबि मर्चेण्ट बैंकिङ नियुक्त
९ प्रतिशतले बढ्यो ज्योति लाइफको सेयर मूल्य, प्रतिकित्ता कति ...